Hiran State - News: HS:-Xaguu ku danbeeyey ololahii doorashada ee musharaxa Professor Warfaa
HS:-Xaguu ku danbeeyey ololahii doorashada ee musharaxa Professor Warfaa
HS:-Dalka Soomaaliya waxaa ka jira amaba laga filan karaa waxii ka danbeeya bisha Agust 20-keeda doorasho lagu soo dooranayo madaxweyne Soomaaliyeed si looga baxo xiliga kumeel gaarka. sidoo kale waxaa xilka madaxweynaha Soomaaliya u sharaxan ku dhawaan 40 muwaadin oo Soomaaliyeed oo iskugu jira aqoonyahano leh aqoon diin iyo mid maadi ah, ganacsato iyo saraakiil hore ula soo shaqeeyey dowladahii soo maray umada Soomaaliyeed waxii ka danbeeyey 1960-kii.
Hadaba iyadoo lagu jiro waqtigii ugu danbeeyey ee ololaha maadama lagu mashquulsan yahay ansaxinta dastuurka uu yeelanayo dalka si baarlamaan cusub loo soo doorto ugu danbeyn Agust/15/2012 ayaa waxaa dal iyo dibad ka socda olole xoogan.
Hadaba musharaxiinta xilkaan u taagan waxa ka mid ah rugcadaaga dhinaca aqoonta maadiga iyo mida diinta ku caan baxay Professor Warfaa oo dhawr bilood ka hor siweyn loo saadaalinayey inuu safka hore kaka jiro musharaxiinta uu damacu kaka jiro xilka madaxweynimada Soomaaliya ayaa safar uu dhawaan Mogdishu ku tagay siweyn ugu lumiyey taageerayaal badan.
Maamulka HS.COM oo bilaaw iyo dhamaad mudo sanad iyo dhawr bilood ah si joogto ah bulshada ugu soo gudbinayey hadba meesha uu marayo ololaha musharaxa madaxweynimada Soomaaliya Professor Warfaa ayaa u guur galay dhawr arimood oo loo aaneynayo in musharaxu lumiyey taageerayaal badan kadib safar uu dhawaan Mogdishu ku tagay taasi oo mid ka mid ah aqoonyahanada reer Hiiraan ku dhiiragelisay inuu dhawaan ku dhawaaqi doono inuu yahay musharax u taagan xilkaan.
Professor Warfaa oo sumacad weyn ku leh bulshada Soomaaliyeed oo ay reer Hiiraan ugu horeeyaan qodobada la taaban karo ee loo aaneynayo inuu ku lumiyey taageerayaal badan ayaa waxaa ka mid ah.
1- Safarkii uu ku tagay Mogdishu ma aheyn safar siyaasad ahaan laga baraan dagay waxuuna musharaxu taageerayaal badan u sheegay xili uu ku sugnaa magaalada London in ay kaligii dooranayaan xildhibaanada garabka uu hogaaminayo Madoobe Nuunoow oo ka soo horjeeday madaxa TFGda.
2-Musharaxa ayaa taageeraal badan u sheegay in marka uu tago Mogdishu uga sii gudbi doono Hiiraan si uu halkaas ugula soo kulmo waxgarad iyo qeybaha bulsahda kala duwan ee ku nool caasimada Hiiraan ee B/weyne.
3- Waxaa siyaabo kala duwan si lama filaan ah iney musharaxa ula sii shaqaeeyaan ku dhiiran waayey inta badan teamkii ololaha xoogan ka waday waqooyiga America xiliyadii uu ololaha xoogan ka waday magaalooyinka waaweyn ee dalka Kanada iyo Mareykanka.
Arimahani oo dhan natiijadii ka soo baxday waxey noqotay in markii uu musharaxu booqanayey amaba ku sii jeeday Soomaaliya dad badan qiyaasayeen inuuba madaxweynaha Soomaaliya noqon lahaa hadii doorashada waqti hore la qaban lahaa xili si aan caadi aheyn loogu soo dhaweeyey wadanka Ingiriiska. hadaba maxaa dhacay safarkii Soomaaliya kadib?
Qeybta labaad filo goor dhaw
· admin on July 14 2012 01:38:20 · 0 Comments · 2416 Reads ·
14,585,838 unique visits